प्रदेश–२ सरकार, बाराको ग्रामीण सडक कहिले बन्छ ?
हिलाम्मे सडकले यात्रा जोखिमपूर्ण
| 2018-08-14 Published
निर्माण सञ्चार, बारा । बाराका अधिकाशं ग्रामीण सडकहरु अवस्था अहिले जोखिमपूर्ण छन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनेको जितेन्द्र सोनलले सार्वजनिक मञ्चमा यस अघि भनेका भाषणहरु यतिबेला जनताहरु सम्झिरहेका छन् ।
उनले पटक पटक भनेका थिए, ‘मुख्य सडकहरु जस्तै ग्रामीण सडकहरु पनि कालोपत्रे गरिने छ । जनतालाई सुखी र समृद्ध बनाइने छ ।’
तर, जब बर्खा लाग्छ, ग्रामीण सडक हिलाम्मे हुन्छन् । हिँउदमा धुलाम्मे ! केही दिनदेखिको अविरल वर्षाले तराईका धेरै जसो सडकहरु बिग्रेभत्केका छन् ।
यस्तै, बाराका विभिन्न स्थानका ग्रामीण सडकहरुको अवस्था त्यस्तै कमजोर छ ।
वर्षाको कारण हिलाम्मे बनेको सडकमा यात्रा गर्न पनि जोखिम बढिरहेको जनगुनासो बढिरहेको छ । यात्रुलाई आवतजावत गर्न सकस भएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु पनि स्वीकार गर्छन् ।
बाराको कोल्हभी नगरपालिका पुग्न यात्रुलाई जंग जित्नु सरह भएको यात्रु बताउँछन् ।
गाडी हिलोमा फसेर हैरान
यहाँका हिले बाटोहरुमा सार्वजनिक यातायात साधनहरु हिलोमा फस्ने भएकाले आधा घन्टामा हुने यात्रा दिनैभर लाग्ने भएको छ ।
बाराको करैयामाई गाप अन्तर्गत पर्ने ठुलो लौतन, सिस्वा, बारागढी गापको बारागढी बजार क्षेत्र हिलाम्मे भएकाले सानादेखि ठुला सवारी घन्टौं अडकिन थालेका छन् ।
बारा ठुलो लौतन बस्ने ३२ वर्षीय सविता देवीले आफूहरुलाई हिले सडकले दुख दिएको गुनासो गर्छिन् । सविता देवी जस्तै गुनासो रहेको छ, प्रसौनी गाप–६ बस्ने राजन साहको ।
प्रसौनी गाप–६ को बेलहिया गाउँ स्थित किरकिचहा नदीमा उचित पुलको व्यवस्था छैन । जसोतसो नदीको यात्रा तयगरेपछी कलैया पुग्ने सकस हुने गरेको छ ।
कच्ची बाटो रहेको सो सडकमा हिलोमय कारण साइकल, मोटरसाइकल, ट्रयाक्टर तथा इ–रिक्सा अड्किने गरेको साहले जनाए ।
त्यस्तै महागढीमाई नगरपालिका–७ मा पर्ने बेनौली देखि बारवा सम्मको सडक पानी पर्दा हिलोले आवतजावत ठप्प हुने गरेको यात्रु बसिर अंसारीले जनाए ।
ग्रेभलमा हिलोपछी गाडीहरु अडकिएर इन्जिन तातने गरेको उनले गुनासो पोखे ।
सडक अत्यन्तै जिर्ण अवस्थामा रहेको अर्को उदाहरण हो पचरौता नगरपालिका अन्तर्गत रहेको भवानीपुर देखि सखुवाट सम्मको बाटो ।
यो सडकको दुवै छेउमा पोखरी रहेको छ । यो सडकमा यात्रा गर्ने यात्रु जोखिम मोलेर यात्रा गर्ने गरेको स्थानीय मुन्ना मंसुरीले बताए ।
केही समय अघि मात्र माटो पुरी ग्राभेल गरिएको यो सडक अहिले ग्रेभल बाटो हो की कच्ची चिन्न गाह्रो हुने गरेको छ ।
यस क्षेत्रको पिपरपमती देखि कोत्वाली, मझरिया देखि सिम्रौनगढ, पचरौता देखि सिम्रौनगढ, बेनौली देखि सखुवा नदी सम्म लगायतको सडकहरु हिलोको कारण जोखिमपुर्ण बनेको छ ।
जुन सुकै बेला गम्भिर दुर्घटना हुन सक्ने बाटो अन्तर्गत हर्दिया देखि चरमोहना जाने बाटो, कलैया देखि मटिअर्वा जाने बाटो तथा इनर्वा चौक देखि लङ्गडा चौक सम्म जाने बाटो रहेको स्थानीय यात्रुहरुले बताएका छन ।
तराई मधेस विकासको मेरुदण्डको रुपले चिन्निे हुलाकी सडकको निर्माण कार्य समेत अस्तव्यस्त भएपछी थप पिडा थपिएको जनताहरुको गुनासो रहेको छ ।
यसको अलवा कलैया रिङ्गरोड सडक, सिम्रौनगढको बजार क्षेत्र लगायतको सडकको अवस्था जिर्ण हुदाँ नगरवासी सास्ती खेप्पिरहेका छन् ।
प्रदेश नम्बर–२ बाट राजु साह कानुको फोटो फिचर
मंगलबार, २९ साउन, ०७५